DMG mafaera, anovhura sei? Ndezvipi izvozvo? | Ndinobva mac
Ignacio Sala | | Mac zvirongwa, Tutorials
Kana isu takazopedzisira tafunga kuchinja kubva paWindows kuenda kuMac, zvinowanzoitika kuti mukati memavhiki ekutanga, unenge warasika zvishoma, kwete chete nekuda kwekushandurwa kwechimiro, asiwo nekuda kwenzira yatinogona kudyidzana nayo. Apple inoshanda sisitimu yemakomputa uye malaptop. Imwe yeshanduko huru isingakwezve kutarisisa ndeye hapana kuwanikwa kwemafaira anoburitswa, akajairwa .exe mafaera.
PaMac fomati yeDMG inoshandiswa. Mafaira mune ino fomati ari mudziyo mafolda kwaunowana zvirongwa izvo zvatinoda kuisa pakombuta yedu, nekukurumidza uye nyore. Kunze kwekunge iwe uchitsvaga chaiwo mafomu asiri kuwanikwa muMac App Store, hazvigone kuti iwe ugopedzisira uine faira yerudzi urwu.
1 Chii chinonzi DMG faira uye ndeyei?
2 Nzira yekuvhura DMG mafaera
2.1 Kuisa zvirimo zviri mukati
2.2 Dzosera zvemukati kune dhiraivha
3 Ndechipi chikumbiro chandinoda kuvhura faira muDMG fomati
4 Zvekuita kana iyo DMG faira ikasavhura
5 Maitiro ekushandura DMG faira kuenda kuEEE
6 Maitiro ekuverenga maDMG mafaera muWindows
6.2 DMG Anoburitsa
7 Maitiro ekuverenga maDMG mafaera muLinux
Chii chinonzi DMG faira uye ndeyei?
DMG mafaera akaenzana nemafaira muIO fomati muWindows, kubvira paanovhurwa, chinogadzirwa chitsva, chinhu chatinofanira kuwana kuitira kuti tiise iyo inoenderana faira pakombuta yedu kana kungoiendesa kune kunyorera folda. . Rudzi urwu rwefaira runowanzo kuve, kuwedzera kune iyo faira iyo inotibvumidza isu kunakidzwa nechirongwa, chinyorwa chinyorwa chine tsananguro pfupi kana rairo nezvekushanda kwayo kana kuenderana.
Nzira yekuvhura DMG mafaera
DMG mafaera akaenzana neIOs muWindows. Iwo mafaera ari muIO fomati, kwete chete anotibvumidza isu kuti tiwane yavo yemukati uye nekuteedzera iwo kuCD kana DVD sezvazviri, asiwo titendere kuti tiise kana kuteedzera zvemukati. Matatu-mana ezvimwe zvinoitika nemafaira ari muDMG fomati, sezvo iyo faira pachayo inogona kuve yekumisikidza yatinoburitsa zip, nguva, kana inogona kunge iri diski mufananidzo ine akasiyana mafaera ayo anofanirwa kuteedzerwa sezvairi mune imwe faira kana pane yekunze dhiraivha.
Kuisa zvirimo zviri mukati
Kunyangwe pakutanga zvingaratidzika kunge tichazoda kuita yakaoma kuita kuti tikwanise kuvhura faira muDMG fomati, hapana chimwe chiri kumberi kubva pachokwadi, nekuti isu tinofanirwa kungobaya kaviri pairi kugadzira unit nyowani uko tichawana zvese zvirimo mukati. Ipapo chete isu tinofanirwa kudaro pinda iyo drive iri mubvunzo uye unomhanya iyo faira kuisa kana kumhanya.
Tinofanira kufunga nezve mhando yefaira iri, nekuti mune dzimwe nguva, kumisikidza pachako hakuitwe paMac yedu, asi iko kunyorera kunongomhanya, saka kana tikazodzima iyo .DMG faira isu ticharasa mukana wekushandisa. Mune zviitiko izvi, kana chiri chishandiso chinoshanda, tinofanirwa kukwevera iyo faira kune kunyorera.
Dzosera zvemukati kune dhiraivha
Kana, kune rimwe divi, chiri chifananidzo chine kopi yeyuniti, hazvizotibatsire chero chinhu chakanaka kuwana mukati mefaira kuti tibvunze kana tisingazokwanise kuwana iyo data kana kugadzira kushandiswa kwekushandisa. Mune zviitiko izvi, isu tinofanirwa kushandisa Disk Utility, iyo yatinogona nayo sarudza zvese faira iri reDMG fomati iyo yatinoda kudzoreredza uye iyo unit kwatinoda kuzviita nekukurumidza uye nyore kwazvo.
Ndechipi chikumbiro chandinoda kuvhura faira muDMG fomati
Sezvo muWindows haudi chero yechitatu-bato kunyorera kuti ushande nemafaira muIO fomati, muMac haudi chero application kushanda nemafaira ari muDMB fomati, kunyangwe paInternet tinogona kuwana akasiyana mafomu anotibvumidza kuti tiite hazvidi chaizvo, kunze kwekunge isu tinomanikidzwa kuvhura iyi faira yefaira pane mamwe mapuratifomu seWindows kana Linux, uko PeaZip application iri yeimwe yeakanyanya kukurudzirwa, application yemahara.
Zvekuita kana iyo DMG faira ikasavhura
Kubva kuvhurwa kweMacOS Sierra, Apple yakaburitsa mukana wekuisa yechitatu-bato kunyorera zvisina kugadzirwa nevakagadziri vakambozivikanwa neApple. Kana iyo DMG faira ine chishandiso chatinoda kuisa ichitaridza mhosho meseji, ichiti iyo faira inogona kunge iine huwori, isu tinofanirwa kumisikidza mukana wekumisikidza wechitatu-bato kunyorera nekupinda unotevera mutsara muTerminal.
sudo spctl -master-regedza
ziso! pamberi patenzi pane mapazi maviri (- -) Tevere isu tinofanirwa kutangazve iyo Tsvaga nemirairo inotevera: Killall Tsvaga
Kana tangopinza iwo murairo, isu tinodzokera kuChengetedzo uye zvakavanzika chikamu chiri mukati meSystem Preferences uye muKubvumira kunyorera kudhanilodha kubva: Kwose.
Maitiro ekushandura DMG faira kuenda kuEEE
Faira reDMG, sezvandambotaura pamusoro apa, dhairekitori rine zvishandiso zvakati wandei, izvo zvinogadzira unit kana tavhura, saka haisi faira rinobatika paMac, nekudaro, hatigone kushandura faira reDMG kuti rive EXE. Kuedza kushandura iyo DMG faira kuita faira rinobatika kwakafanana nekushandura dhairekitori nemifananidzo (semuenzaniso) kuita faira rinogoneka.
Maitiro ekuverenga maDMG mafaera muWindows
Kana isu tichida kuwana izvo zvirimo zvakachengetwa muDMG faira paPC, muWindows isu tinayo akasiyana maapplication anotibvumira kuti tiburitse iyo faira kuti tiwane zvirimo. Imwe nyaya ndeyekuti isu tinogona kuita chimwe chinhu nezviri mariri. Iwo akanakisa maficha atinogona kuwana parizvino pamusika webasa iri PeaZip, 7-Zip uye DMG Extractor
Imwe yemidziyo yemahara yemahara yekushanda nemafaira akakomberedzwa ndeye PeaZip, chishandiso chinoenderana neese akanyanya kushandiswa mafomati pamusika, kuwedzera kune DMG, ISO, TAR, ARC, LHA, UDF ... Iyo yekushandisa interface inonzwisisika uye kwete isu hatizove nedambudziko nekukurumidza kubata ichi chishandiso kuvhura chero DMG faira kubva kuWindows PC yedu.
DMG Extractor, sezita zvarinoratidzira, chishandiso chakanakisa kugona bvisa zvemukati kubva mumafaira ari muDMG fomati nekukurumidza uye nyore. Ichi chishandiso hachina kusununguka asi kune chaiwo zviitiko, isu tinokwanisa kurodha muedzo vhezheni kuburikidza neiyi inotevera chinongedzo, vhezheni iyo inotibvumidza isu kuti tibvise mafaira muDMG fomati ine saizi isiri yakakura kupfuura 4 GB
7-Zip chishandiso chakanakisa kumanikidza uye kupwanya chero mhando yefaira pane yedu Windows PC, chishandiso icho zvakare iyo yemahara zvachose uye inoenderana ne macOS DMG mafaera. Kana tangoisa iko kunyorera, isu tinongofanirwa kuzviisa pamusoro pefaira, tinya-kurudyi uye sarudza kuvhura ne7-zip kuti utange kuburitsa zvirimo.
Maitiro ekuverenga maDMG mafaera muLinux
Asi kana isu tichida kuvhura mafaera muDMG fomati muLinux, tinogona kushandisa PeaZip zvakare, chishandiso chimwe chete icho chatinogona kushandisa kudzvinyirira rudzi urwu rwemafaira muWindows, application inoenderana nemafomati anodarika zana nemakumi masere Uye zvakare yakasununguka zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » .Dmg mafaera
santiago estrada akadaro
Kana ikadzvanya kaviri faira iyo isingavhure, inoramba yakaita sekunge yanga isina kupinda mufaira
Pindura kuna santiago Estrada
Dzidzo, Macs uye Mazano. Kufamba kwakakosha
Lisa, mwanasikana waSteve Jobs ari kunyora bhuku nezvehukama hwake nababa vake